अब अर्को कम्पनीको आइपियो निस्कासन हुदै छ ? निस्कासन मिति सहित ⋆ afno sansar
अब अर्को कम्पनीको आइपियो निस्कासन हुदै छ ? निस्कासन मिति सहित
प्रकासित : १५ असार २०७८, मंगलवार ०३:५४
मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले असार १७ गतेदेखि आईपीओ विक्री खुला गर्ने भएको छ ।
कम्पनीले जारी पूँजी रू. १२ करोड ११ लाख ५० हजारको३२ दशमलव ११ प्रतिशतले हुन आउने रू. ३ करोड ८९ लाख बराबरको आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो ।कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० अंकित दरका ३ लाख ८९ हजार कित्ता साधारण शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो ।
यसमध्ये ६ हजार ५८ कित्ता अर्थात् जारी पूँजीको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत शेयर कर्मचारीहरुका लागि र कुल निष्कासनको ५ प्रतिशत अर्थात् १९ हजार ४५० कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । सर्वसाधारणले बाँकी ३ लाख ६३ हजार ४९२ कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्ने भएका छन् ।
आवेदकले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतममा १ हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । आईपीओ निष्कासन बन्द मिति छिटोमा असार २१गते र ढिलोमा असार ३१ गते रहेको छ । आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
आवेदकले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सि आस्बा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै मेरोशेयर सफ्टवेयरमार्फत पनि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
१५ असार २०७८, मंगलवार ०३:५४